I-Nigeria ithuthukise ubuchwepheshe bokuhlolela i-Covid-19 | Scrolla Izindaba
Ukuhlolwa okusha akusheshi nje kuphela kodwa kushibhile kunokunye kokuhlolela leligciwane – futhi kungatholakala naseNingizimu Afrika.
Ukuba izwe elinabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-180, lokhu kuzokwenza i-Nigeria ikwazi ukuhlola abantu abaningi ngalobu buchwroheshe obusha.
Bangaphansi kwephesenti elilodwa abantu base-Nigeria asebehloliwe kuze kube manje – futhi cishe akekho noyedwa ngaphandle kwamadolobha ohlolwayo.
“Sibone kunesidingo sezinsiza zokuhlola ezengeziwe, ikakhulu ezinganikeza imiphumela ngesikhathi esifushane ngoba izibhedlela bezinqaba ukwelapha iziguli ngaphandle kwemiphumela ye-Covid-19,” kusho uBabatunde Salako, isikhulu sezempilo e-Nigeria.
I-Senegal iphinde yakhiqiza obayo ubuchwepheshe bokuhlolela i-Covid-19 esingaveza imiphumela kungakapheli imizuzu eyi-10.
Isithombe: Twitter @AjuriNgelale